Ogaden News Agency (ONA) – Halgame Xikam Sheekh oo dib loogu doortay Gudoomiyaha Jaaliyadda Melbourne
Halgame Xikam Sheekh oo dib loogu doortay Gudoomiyaha Jaaliyadda Melbourne
Maanta oo ay tahay taariikhdu 26-812 waxaa shir si fiican loo soo agaasimey isugu yimid maamulka xubnaha jaaliyada S.Ogadenia ee magaalada Melbourne shirkaas oo looga gol lahaa in maamul cusub loogu doorto jaaliyada iyo maamulkii hore oo xil wareejin buuxda ku samaynayay.
Shirka ayaa sidii dhaqanka u ahayd jaaliyadaha Ogadenya waxaa lagu furay aayadah quraanka kariimka oo uu akhriyay Ahmed rashiid. Aayadahaa iyo wacdigii diiniga ahaa kadib waxaa shirka furay gudoomiyihii hore ee jaaliyadda halgame Ugaas Axmed naasir khaliif isagoo u bogaadiyay kasoo qayb galayaasha jaaliyadda sida wanaagsanayd ee intii uu hayay xilka ay ula shaqaynayeen, iyo guulihii ay gaadhay jaaliyaddu. Intaa kadib waxaa shirk uu soo dhaweeyay gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda ay dooratay halgame Xikim Sheikh Abdullahi, oo ah nin rugcadaa ah maamulka jaaliayadana inbadan soo hayay oo ah guddoomiyihii jaaliyadda maamulkeeda hayay waqtigii lagu qabtay shir sanadeedkii jaaliyaddaha Ogadenia ee caalamagi sanadkii 2011kii kaasoo ahaa shir aad taariikhda Ogadenia galay. Waxaa hadalka qaatay Gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda Xikam Sh oo ka war bixiyey halganka Ogadenia meeysha uu marayo iyo sida loogu bahan yahay in abaabul xoog leh la galo lagana tashado sidii looga hortagi lahaa hagar daamada gumeysiga xiligan uu isbadalka ka socdo xukunka Itobiya.
Ka dib waxaa hadalka lagu soo wareejiyey gudoomiyihii hore ee jaaliiyada Ahmed nasir Khalif oo ka war bixiyey wax qabadkii jaaliyadda dhoorkii bilood ee ugu dambeeyey waxii u qabsoomay. War bixintii ka dib waxuu ku wareejiyey dhamaan documentigii jaaliyadd Gudoomiyaha cusub ee la doortay iyadoo lagu soo wareejiyey hadalkii gudoomiyaha gudiyga anshax iyo hanti dhoorka Hassan (qubi) oo uga mahad celiyey sida wanagsan ee xilka loola kala wareegayo loona xisaabtamayo taasoo uu ku tilmaamay inay tahay mid ku dayasho mudan mustaqbalka soo socoda. Waxuu intaas raaciyey in looga bahan yahay dhamaan xubnaha goobta fadhiya in si wanagsan loola shaqeeyo gudoomiyaha jaaliyadda iyo gudigiisa fulinta oo maanta halkaan laga magacaabay.
Waxaa goob joog ka ahaa shirka Ururka Dhalinyarada iyo Arday Ogadenia (OYSU), iyadoo uu goobta ka hadlay gudomiyaah ku xigeynka Ururka Dhalinyarada oo ah ku simaha gudomiyaha OYSU-Melbourne halgame Mukhatar Mohamud (Dhariiq) oo u hambalyey gudiga cusub iyo gudoomiyaaha. Wuxuu intaa raaciyay in OYSU ay sifican ula shaqeyn doonaan jaaliyadda ayna garab istaagi doonaan wax kasta oo la qabanayo.
Shirka oo guul ku dhamaaday ayaa ugu dambayntii waxaa shirka xidhay gudomiyaha jaaliyadda Ogadenia ee Melbourne Halgame Xikim sheikh.
Hani Abdullaahi – Hogaanka warfaafinta ururka OYSU